Baby GPS Smart Watch T 19
88,350 Ks 93,000 Ks
Video Chat အသုံးပြုနိုင်သော Android 4G အမျိုးအစား ကလေး GPS ဖုန်းနာရီဖြစ်သည်။လက်ဆောင် - MPT ဆင်းကဒ်နှင့် ဘီလ် ၁၀၀၀ ကျပ် ပါပြီး။အင်တာနက် Settings အပြီးအစီး ချိန်ပြီး၊ အကောင့်ဖွင့် အသင့်သုံးနိုင်ပါသည်။ကလ..
Baby LBS Smart Watch F3
23,750 Ks 25,000 Ks
ကလေး ခြေရာခံ LBS ဖုန်းနာရီဖြစ်သည်။အချိန်နှင့် တပြေးညီ ခြေရာခံနိုင်သော စနစ် (Real-time locating)၊ကလေးဘက်မှ အသံကို နာရီကနေ တဆင့် အချိန်၊ နေရာ မရွေး မိမိဖုန်းဖြင့် ကလေး မသိအောင် အလိုအလျောက် နားထောင်နိုင်..
Smart Watch DM 09 - Black
66,500 Ks 70,000 Ks
အရွယ်အစား ဒိုင်ခွက်အသေး ကြိုက်သူများအတွက် ဖုန်းနာရီ DM 09 ဖြစ်သည်။မတ်မိုရီကဒ်မရပါ။ကင်မရာပါပါသည်။အားကစားလုပ်ဆောင်ချက်များ ပါပါသည်။Silica Gel လက်ပတ် အမျိုးအစားဖြစ်သည်။သံလိုက် အားသွင်းကြိုး အမျိူးအစား ဖြ..
Smart Watch KW 18 (King Wear)
71,250 Ks 75,000 Ks
ရုပ်ထွက် Screen မျက်နှာပြင် ဒိုင်ခွက်အပြည့် ပါဝင်ပြီး နှလုံးခုန်နှုန်းတိုင်း အာရုံခံစနစ် ပါဝင်သည့် ရေစိုခံ ဖုန်းစမတ်နာရီ ဖြစ်ပါသည်။2G အမျိူးအစား ဖုန်းနာရီ ဖြစ်ပါသည်။ Sim Card နှင့် SD Card ကို ထည့်ရန်..
Smart Watch W 34 (Micro USB Charging)
42,750 Ks 45,000 Ks
လုပ်ဆောင်ချက်တွဲသုံးရန်ဖုန်းတွင်Android Version 4.3, IOS Version 7.0နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။Sim Card နှင့် Memory card အသုံးပြုလို့မရပါ။ ကင်မရာမပါဝင်ပါ။ သွေးခုန်နှုန်း၊ ECG Monitor ပါရှိပြီးအခြားလုပ်ဆောင်ချ..
Smart Watch W 34 Pro
57,000 Ks 60,000 Ks
Watch Face ပေါင်း ရာချီ ထည့်‌သွင်း အသုံးပြုနိုင်၊ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ လက်ပတ်ပါ အလွယ်တကူ ဖြုတ်လဲနိုင်သော ဘလူးတု ဖုန်းနာရီ W34 Pro ဖြစ်ပါသည်။သွးခုန်နှုန်း၊ သွေးပေါင်ချိန်၊ သွေးထဲ အောက်ဆီဂျင် လည်ပတ်နူန်းတိုင..
Sport Smart Watch W 68 (Metal Strap)
61,750 Ks 65,000 Ks
Always Time Dispaly ပါဝင်ပြီး၊ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Watch လက်ပတ်ကို အလွယ်တကူ လဲလည်နိုင်သော Sport Smart Watch ဖြစ်ပါသည်။ကိုက်နှစ်သက်ရာ Apple Watch လက်ပတ်ကြိုး 42/44 MM အရွယ်အစားကို လဲလည်နိုင်ပါသည်။ရေစိုခံ၊ ..
Sport Smart Watch W 68 (Selica Gel)
Sport Smart Watch Y7 Pro (Colmi/ LEMFO) - Black
မျက်နှာပြင်အကျယ် 1.3inches IPS Touch Screen ပေါ်တွင် အရောင်အသွေးစုံလွင်စွာ ဖော်ပြပေးနိုင်သောကြောင့် resolution အဖြူအမဲရုပ်ထွက်တွေထက် ပိုမို ဆွဲဆောင်နိုင်ပီး နေ့အချိန်နေရောင်အောက်ပါ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ တ..